Azia sy Oseania: Lahatsarin’ny vokatry ny loza voajanahary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Oktobra 2009 6:55 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Nederlands, polski, English
Tao anatin'ny herinandro monja dia horohorontany, tsunami ary rivodoza isan-karazany no nandòna ny firenena maro any Ôseania, Azia atsinanana sy Azia atsimo atsinanana.
Tany amin'ny lahatsoratry ny Global Voices (teny anglisy) tany aloha tany no efa nampahalala antsika tamin'izay nitranga tany Thailandy, Kambodza, Laos, Philippines, ary Vietnam tamin'izay nafitsoky ny rivodoza Ketsana (Ondoy) sy ireo fiverimberenana horohorontany mahery vaika tany Indonezia (1 sy 2) indray andro monja taorian'ny hovitrovitry ny tany niteraka tsunami tany Samoa.
Nitantara izay zavatra niainany sy nihatra taminy tamin'ny alalan'ny lahatsary ny olotsotra niharan'ireny loza voajanahary ireny mba hahafantaran'ny olona any amin'ny faritra hafa ny haben'ny fahapotehana.
Namoaka lahatsoratra roa sosona ny bolongan'i YouTube's CitizenTube momba ireo raharaha ireo. Ity voalohany ity dia maneho ny vokatry ny hovitrovitry ny tany sy ny tsunami tany Samoa:
Ary io manaraka io kosa dia maneho ny lahatsary isan-karazany tamin'izay nitranga tamin'ny horohorontany tany Somathrà.
Ity indray namoaka ny ankohonany ivelan'ny trano, misintona ny fefy vy sao mbola mamaly (ny horohorontany):
Ity hafa ity indray kosa mampiseho ny eny andalambe amin'izay heverina ho ivotoeram-pivarotana iray niharan'ny fahasimbana sy toerana iray tratran'ny fahamaizana:
Ny lahatsary manaraka indray mitodika amin'ny rivodoza (Ketsana) Ondoy, izay nandalo tany Philippines. Hahita tondra-drano ianao ao, ary toy izao ny fitantaran'ny mpaka sary:
Vao avy teny amoron-drano aho 5 minitra lasa izay. Nihena be dia be ilay elanelana haavo 10-15 pieds (3,5 – 5 m) teo amin'ny reniranon'i Marikina sy ny seranam-pitodiana hany ka efa manafosafo an'i Eastwood, Metro an'i Manille ny rano. Nanatona ahy ny mpiambina ity faritra voaaro ity ka nanaloka ahy tamin'ny elony raha mbola teo ampakana sary tamin'ny findaiko aho. “Fa aiza ny polisy na ny mpamonjy voina?” hoy aho nanontany. Nanondro tasy maintimainty teo afovoandrano tokotokony ho 300-400 metatra ankavanako izy. “vehivavy nitondra zaza an-trotroana 2 taona no teo. Nandalo teto izy nanofahofa tanana anay hamonjy azy. Tsy afa-nanao na inona na inona akory izahay fa dobo tao anatin'ny 5 segondra izy. Nanatrika olona hafa dobo ihany koa izahay.” Niraviravy tanana fotsiny izahay nahita olona mihoatra ny 20 mipetraka ambonin'ny tafontranony izay tsy tratran'ny rano masiaka dia masiaka… miandry ny mpamonjy voina.
Ity lahatsary manaraka ity kosa, tondra-drano, mampiseho ny endrika famonjena voina isan-karazany, Ao anatin'ny fiakaran'ny rano, no ahitana andian'ankizy mifalihavanja sy milalao:
Tahaka ny hoe fomba iray entina mahafantatra kokoa ny loza voajanahary ny hatsikana ho an'ny Filipiana. Ohatra, nisy hafa nampita indray ity hafatra am-bolongana nosoratan'i Gwendolyn So, izay nitantarany fa tratran'ny tondra-drano hatrany izy isan-taona farafahakeliny nandritra ny folo taona mahery, Ho hitanao fa eny antsefatsefan'ny famonjena ny kojakoja, ny entana isan-karazany sy ny fianakaviana eny, dia mbola misy fotoana isangisangiana hatrany:
5. Mbola afa-manala azy ihany ianao ao anatin'ny voina ka dia navoakako ny fakantsarinay ary dia naka sary aho. Izany no natao dia ny mba hihomehezana ahafahana manara-maso ny fahapotehana manodidina anay, ny kalalao sy ny voalavo milomano, ny ranomaintin'ny menaka mitsingevaheva manodidina.
Ary hoy izy nametrapetraka tanjona tamin'ny faramparany:
Mahaverivery saina vetivety rehefa ianjadian'ny voina tahaka itony, malahelo ny fananana very (indrindra fa ny fiara), saingy aoka hisaotra mandrakariva noho ny fiainana efa nandalovanao sy ny nanomezany anao ankohonana sy izay tianao
Sary nampiasaina ho fanaingoana navoakan'i IronChefBalara araka ny fepetran'ny CC license